सरकारी अस्पतालमा दरबन्दी छ, डाक्टर छैनन् | चितवन पोष्ट
सरकारी अस्पतालमा दरबन्दी छ, डाक्टर छैनन्
भरतपुर । ६ सय शøया रहेको भरतपुरको सरकारी अस्पतालमा शव परीक्षण (पोष्टमार्टम)मा समस्या हुने गरेको छ ।
सो अस्पतालमा दरबन्दी हुँदा पनि पोस्टमार्टम परीक्षणका लागि फरेन्सिक विशेषज्ञ डाक्टर नहुँदा निजी मेडिकल कलेजबाट विशेषज्ञ नियुक्त गरी पोस्टमार्टम गर्ने काम भइरहेको छ । सरकारी डाक्टर नहुँदा निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत डाक्टरले शव परीक्षणको काम गरिरहेका छन् ।
अस्पतालमा ल्याइने केही शवको भने मेडिकल अफिसरबाट परीक्षण हुने गरेको छ । देशमा नै फरेन्सिक विशषज्ञ डाक्टरको अभाव रहेकाले समस्या भएको अस्पताल प्रशासकहरु बताउँछन् ।
यस अस्पतालका फरेन्सिक डाक्टर वीरेन्द्र मण्डल ५ महिनाअघि सर्लाही अस्पतालमा मेसुका रुपमा सरूवा भएपछि अहिलेसम्म अर्को फरेन्सिक डाक्टरको नियुक्ति हुन सकेको छैन । चितवन मेडिकल कलेजका प्रो.डा. तेजप्रसाद चटौतले अहिले भरतपुर अस्पतालमा गई दैनिकजसो शव पोस्टमार्टम गर्ने गरेका छन् ।
एउटा शव परीक्षण गरेबापत् प्रो.डा.चटौतले अस्पताल विकास समितिबाट ५ सय र नेपाल सरकारबाट ५ सय रूपैयाँ लिने गरेका छन् । मेडिकल कलेजहरुमा फरेन्सिक मेडिसिन अध्ययन हुने हँुदा यहाँ विशेषज्ञ फरेन्सिक डाक्टरहरु रहने गरेका छन् ।
‘हामीले विभाग, मन्त्रालयमा डाक्टर पठाइदिनका लागि भनेका छौँ, तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन’, भरतपुर अस्पतालका मेसु डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले भने ।
चितवन जिल्लासहित तनहुँ, नवलपुर र मकवानपुरको मनहरी क्षेत्रसम्मको शवको पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने अवस्था छ । ‘कुनै समय अन्य जिल्लाको तुलनामा भरतपुर अस्पताल सुविधायुक्त भएकाले यहाँ शव पोस्टमार्टमका लागि ल्याउनु ठीक थियो’, भरतपुर अस्पतालका मेसु प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले भने, ‘छिमेकी जिल्लाहरुमा पनि अहिले ५० बेडको अस्पताल र आवश्यक डाक्टरहरु रहेका छन्, अब भरतपुर अस्पताल नै ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन ।’
शव पोस्टमार्टम सम्बन्धित जिल्ला अस्पतालमै गर्ने÷गराउने विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि छलफल भएको उनले बताए ।
‘अन्य जिल्लामा भएका घटनाका सम्बन्धमा भरतपुर अस्पतालका डाक्टरले शव परीक्षण गर्दा मुद्दामामिला भएको अवस्थामा सम्बन्धित जिल्लाको अदालतमा हाजिर हुनुपर्ने बाध्यताले पनि हाम्रो नियमित काममा असर गरेको छ’, मेसु पौडेलले भने ।
भरतपुर अस्पतालमा दैनिक ३ जनाको शव पोस्टमार्टम हुने गरेको छ । १२ वटा शव राख्ने क्षमता भएको शवगृह रहे पनि बेवारिसे शव धेरै हुँदा कहिलेकाहीँ शवहरु खप्टाएर राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलले बताए ।
दुर्घटना र अन्य घटनाका शवहरु आफन्तले बुझेर लैजाने गरेका छन् । बेवारिसे शवहरु भने भरतपुर महानगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।